I-5 yeyona Ndawo yeShishini yoRhwebo ngeeNdawo kunye naMathuba ku-2017-Ibhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW
I-5 yeeNdawo eziNgcono zoShishino lweeNdawo kunye naMathuba kwi2017
UCanzibe 29, 2017 by Phawula u-Justine De Mesa, Iimbono zizonke:
Ukuthengiswa kwezindlu kubonakala kungomnye weyona mizi mveliso mikhulu apho amathuba eshishini kwikona nganye. Abanini bamashishini abaninzi kule ndima bathi zininzi iindlela zokujika inzuzo. Lo ngumsebenzi oguqukayo onokuba nawo ngenxa yokuba unokuseta ishedyuli yakho kwaye uqiniseke ngomvuzo wakho wonyaka. Nazi ezi-5 zeembono zeshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba ukuba ufuna ukuqhuba kweli shishini.
1. Umthengisi wezindlu
Umsebenzi wakho kukusebenza njengothetha-thethwano phakathi kwabathengisi kunye nabathengi bepropathi yendawo yokuhlala. Uzama ukuthelekisa abathengi abafuna ukuthenga kunye nomthengisi abanqwenela ukuthengisa. Ungaqala ngokufumana inkqubo elungileyo yolawulo apho ungangena khona bonke abafowunelwa kunye nethemba lakho. Unokufuna ukulandela kubo ixesha elingaphezulu kunye neqonga elifana neOnlineous yile nto uyifunayo. Isixhobo esisebenzayo sokufumana ulwazi olugcinileyo. Kuya kufuneka usebenzise i-intanethi ukuthengisa kwihlabathi lanamhlanje. Kuya kufuneka usebenzise iwebhusayithi yakho okanye iiakhawunti zemidiya yoluntu ukunxibelelana nabathengi abaza kubakho. Nangona kunjalo, esona sixhobo sisebenzayo ukuba ungene ngaphandle komthungo kukhuphiswano ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba kukuba nesicwangciso.
2. Ushishino lokuNakekelwa kweLaw
Kukho izizathu ezininzi zokuqalisa ngenkonzo yokhathalelo lwengca. Amathuba eli candelo leenkonzo maninzi kwaye uya kuba nakho ukwenza ishishini lakho ngokwezifiso ukuba lilingane neemfuno kunye neminqweno yakho, ngakumbi ukuba usekhaya kwaye ulungiselela indawo yakowenu. Eli lishishini elizinzileyo kuba iimfuno zabathengi bakho zokukhathalela i-lawn ziya kuhlala zimi kwaye ziyahambelana. Bayakufuna ukuba ulawule i-lawn yabo okungenani ngeveki. Omnye umthengi ufuna ukhathalelo olongezelelekileyo kwaye ucela ukusetyenziswa kwezichumisi ezikhethekileyo kunye nokunyanga ukhula kunye neempuphu ezivelisa ingeniso eyongezelelweyo. Oku kuyanyangeka kuba abathengi bafuna ezinye iinkonzo njengokufakwa kwesodod, ukulima igadi, ukugawula umthi, ukhula, kunye nezinye izinto ezininzi, oku kukuvumela ukuba ukhulise ishishini lakho.
3. Umyili Wezindlu
Umvelisi wepropathi ethenga iipropathi kwaye enze ukuphuculwa kwesakhiwo okanye ukwakha entsha emva koko bayibeka kwakhona kwintengiso kwakhona. Le yeyona ndlela yaziwa namhlanje njengezindlu ezibalekayo. Ukuphumelela kolu hlobo lweshishini, kufuneka uwaqonde amathuba amahle kwaye uhlaziyiwe malunga neendlela zentengiso zakutshanje. Kuya kufuneka usebenze kunye neefemu zokwakha ukuphucula iipropathi zorhwebo, ukwakha ubudlelwane nabantu bendawo, kunye nokusebenza kurhwebo lokuthengisa izindlu nomhlaba. Kufuneka uhlale uvuselela ishishini lakho ukuze ukhule ngokukhuselekileyo. Unokusebenzisa nesoftware yobalo njenge Iincwadi ezikhawulezayo kwi-Intanethi kunye nokukhuthaza ubuchule ekuhlawuleni abasebenzi bakho ngokusebenzisa isoftware yokuhlawula.
4. Yakha kwaye uqeshise ngeebhloko zeApile
Uninzi lwabantu lujonga olu hlobo lweshishini kuba iibhloko zokuhlala eziqeshisayo zivelisa ukuhamba kwemali okuzinzileyo rhoqo ngenyanga, ngamanye amaxesha ngonyaka. Kufuneka uhlale nje kwaye uqokelele itsheki yerenti. Xa kuthelekiswa namanye amashishini ezindlu, izindlu zilula ukusebenza kwaye ubudlelwane bakho nabaqeshi bakho buqondile. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ukuhlolwa kwabaqeshi kunokuba lixesha lokuchitha ixesha kuya kuba yinto efanelekileyo ukuba unokuba ngabaqeshi abaxanduva, oku kungavula iminyango ngamanye amathuba anje ngokufumana imihlaba kunye nezivumelwano zokuqeshisa njengokuba usenza umsebenzi wakho.
5. Yenza iWebhusayithi yeePropathi eziThengiswayo, zeRente, kunye neRente
Enye yeendlela ezilula zokwenza imali kushishino lokuthengisa izindlu nomhlaba kukudala iwebhusayithi apho abantu banenkululeko yokuthenga iipropathi zabo ezithengiswayo, eziqeshisayo, okanye eziqeshisayo kwintengiso. Kuyinto elula kunye nexabiso eliphantsi lokuqalisa ishishini. Ungayisebenzisa ngokulula kwaye unokuqokelela umrhumo wobulungu okanye umrhumo wolawulo kubanini abafuna ukuthengisa iipropathi zabo. Ukuba iwebhusayithi yakho idala ukugcwala okukhulu, unokufumana isixa semali esihle kubahambisi.
Phawula u-Justine De Mesa
Phawula u-Justine De Mesa Ngamana 29, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Ishishini lokuthengisa izindlu noqhotyosho ishishini, Iingcamango zoshishino, umbono weshishini ngo-2017, Abashishini, iindlela zentengiso yezindlu, Izindlu ezithengiswayo, Umthengisi zindlu, Ishishini lokuthengisa izindlu, umakhi wezindlu, Umzi mveliso woRhwebo. Bookmark le Permalink.
Matshi 16, 2017 Iindlela zobuchule zothumelo lwerhafu Eyona nto ithethwa ngabalahliweyo kukuba iingqondo zinokufumana ithuba lokufumana iphuli enkulu yemali iphakamisa amathuba okuba izibonelelo ezinkulu kunye nokubuyiselwa. Esi sesona sizathu sokuba iindlela zokucekisa iintlawulo zerhafu ziqhutywa rhoqo ngonyaka njengendlela yokwenza inkcitho kunye nomsebenzi wabo. Ukugcina oku engqondweni, kukho iindlela zerhafu ezininzi ezitsala umdla kwaye kufuneka zaziwe nakuwe. Zezi: a) Abatyali mali bezindlu bajonge ukwandisa iipropathi zabo […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Julayi 4, 2018 I-5 kufuneka-ube neziXhobo zokwakha zeShishini leRhwebo lwakho Kuyinyani eqhelekileyo ukuba sinokufumana iintlobo ezininzi ezibanzi zoomatshini bokwakha kuzo zonke iindawo zokwakha ezenza ukuba imisebenzi yolwakhiwo ibe lula, ikhawuleze kwaye iphephe. Ukuba uqala ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba, nantsi izixhobo ezi-5 ekufuneka-zinezixhobo zokwakha eziya kufuneka: Ilahleko yokulahla Inqwelo yokulahla inkunkuma yenye yezixhobo eziqhelekileyo zokwakha ngesizathu esihle. Iilori zokulahla zisetyenziselwa ukuthutha izinto ezinje ngegrabile, isanti okanye […] exhonyiweyo Akohlulwanga
January 1, 2019 Iingcebiso ezi-5 zokulinganisa ngokukhawuleza inkqubo ye-Affiliate Kwi-intanethi, kukho iitoni zeendlela zokwenza imali kwi-intanethi kunye nokukhuthaza iimveliso zeshishini kwihlabathi liphela. Ukuba uqala ishishini elincinci kwaye unyuse kwinqanaba elikhulu, ke ukuthengisa ngokudibeneyo yeyona ndlela inokubaluleka yokunyusa ishishini. Kwintengiso edibeneyo, phucula iimveliso okanye ishishini leenkampani ngomnye undwendwe okanye abathengi. Kwezi ntengiso kubandakanywa amalungu amathathu okanye amane ukuze andise ishishini. Intengiso ehambelana nayo isebenzisa iindlela ngeendlela ukukhuthaza […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Matshi 8, 2017 Ngawaphi amaNqaku aFumanekayo kubatyalomali abasakhasayo kuShishino lweeNdawo eziThengisa izindlu? Phakathi konyaka wama-2014 nowama-2015, imakethi yokuthengiswa kwezindlu ayitshintshiyo kakhulu. Imakethi yentengiso ihamba kancinci kodwa izinzile, kwaye esona sizathu sokuba loo nto inento yokwenza nezoqoqosho kunye nehlabathi lishishini. Iindaba ezimbi zabatyali zimdidekile yile nto iqhubekayo. Baqinisekile ukuba eli lixesha elifanelekileyo lokutyala okanye hayi. Utyalomali ngokuthengisa izindlu nomhlaba lishishini elibonakala lingathi li-metamorphosing. Nangona utyalomali lwamanye amazwe […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Disemba 30, 2017 Izinto eziyi-7 Zonke iiarhente zeearhente zeNdawo kufuneka zazi Umthengisi wokuthengiswa kwezindlu unoxanduva lokunceda umthengi afumane impahla ngexabiso eliwela kwinqanaba lentuthuzelo yomthengi. Ukwaqonda iimfuno zabathengi zokuhamba ngenqanawa. Ngale ndlela, ukhusela abathengi kwaye ubancede ukuba benze eyona mvumelwano. Nangona kunjalo, unokufumana idrama yansuku zonke kwaye ufumane imeko engathandekiyo. Sisizathu; umntu kufuneka aqwalasele ezinye iinketho ngelixa esebenza rhoqo. Okulandelayo linani lezinto […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 16, 2017 Isikhokelo seMpilo yokutya nokhuseleko: UMthetho wokuThenga iPropathi Abaxhasi bokutya babamba uxanduva lokulandela imithetho yokhuseleko nemigaqo yokhuseleko. Ezi zinto zibekwa ukuba zikhusele bobabini abasebenzi kuyo nayiphi na ingozi, kunye nokukhusela abathengi ukuba bangabinawo amava amabi aphathekayo. Nazi ezinye zeziseko ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa uqala ishishini lokutyela. Uqeqesho kunye nemigangatho: Imigangatho yoqeqesho kunye nemigaqo yempilo kunye nokhuseleko kufuneka ilandelwe kwi-T ngokulandelelana […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Februwari 13, 2017 Iindlela ezi-5 ezinkulu eziTshisayo iMarike yezezindlu kulo nyaka Sele inyanga isele kwikota yokuqala ka-2017 kwaye nezigqibo zakho ziza kudlala, unokufuna ukongeza enye into ebalulekileyo ekufuneka uyifezekisile-ukuba ngumnini khaya. Imakethi yezindlu isenokuba izinze emva kwentlekele yokuthengiswa kwezindlu kwiminyaka eliqela eyadlulayo nangona kunjalo, masingachithi ixesha lethu kunye nemali ngaphezulu. Ngalo nyaka wokugqibela izipho kunye / okanye usapho lwakho ikhaya elilungileyo nelonwabileyo ikhaya elitsha (okanye eyakho kuqala!). Millenium iyashukuma […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu